U Khin Shwe, Shwe Mann’s family, Chinese Communist party, Dr. Aye Maung and Ma Ba Tha Monks are planning another massive Anti-Myanmar Muslim Riots in mainland Myanmar and also another Anti-Rohingya Riots in Rakhine | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeU Khin Shwe, Shwe Mann’s family, Chinese Communist party, Dr. Aye Maung and Ma Ba Tha Monks are planning another massive Anti-Myanmar Muslim Riots in mainland Myanmar and also another Anti-Rohingya Riots in Rakhine
U Khin Shwe, Shwe Mann’s family, Chinese Communist party, Dr. Aye Maung and Ma Ba Tha Monks are planning another massive Anti-Myanmar Muslim Riots in mainland Myanmar and also another Anti-Rohingya Riots in Rakhine
နယ်စပ်ဒေသမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် တွေကို အောင်မြင်အောင် တရုတ် ပြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေးထူထောင်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ် နေချိန်…
U Khin Shwe and Shwe Mann’s family are definitely involved in U Ko Ni murder also. They donatedalot to Ma Ba Tha, related to whole sale drug trafficking, related to stolen Buddha Statues, dealings with the known murderers of U Ko Ni.
နောက် ထပ် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ထောက်ချောက်တွေကို စီစဉ်နေကြပါတယ.်။ ရခိုင်ဒေသမှာ လည်း မျိုး နှစ်အေးမောင် ဦးစီးတဲ့ အဖွဲ့ တွေဟာ တရုတ်ကွန် မြူ နစ် ပါတီ အထောက်အပံ့နဲ့ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် ပြသနာတွေ ဖန်တီးဖို့ စီစဉ်နေကြာင်းပါ။ သတိရှိကြပါ။
ပြည်တွင်းမှာ မဘသနဲ့ မျိုးနှစ် တစုရဲ့ ပြည်တွင်းရေး ဆူပူအောင် လုပ်ကြံ လှု့ံ ဆော်နေတဲ့ နေရာမှာ နောက်ကွယ် က ပါဝင် ပတ် သက်နေသူတွေကို ပြည်သူတွေ ဖော်ထုတ် သိရှိထားကြဖို့ လိုပါတယ်။
သူရရွှေမန်း ရဲ့ ခမည်းခမက် ခင် ရွှေဟာ မဘသနဲ့ မျိုးနှစ်တွေကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အကြီးအကျယ် ပြု လုပ်နေပါတယ်။ တရုတ် ခရို နီတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။
မူဆလင်အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲ မှာလဲ မူလဆင် ခရိုနီတွေက စစ်အုပ်စု အလိုကျ လုပ်ဆောင်“
နေတာကို တွေ့ မြင်နေ၇ပါတယ်။ အယင် က ချည် နှောင်ခဲ့ တဲ့ ကြိုးတွေထဲ က ရုန်းမထွက်နိုင်ဖြစ်ကြ၇တာပါ။
တရသ လက်နက်ကိုင်တွေ လေးစားခဲ့ ရတဲ့ ပဒို မန်း ရှာ ကို လုပ်ကြံ ဖို့နောက်ကွယ်က စီမံကိန်း ဆွဲ ခဲ့ သူက ရွှေမန်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက စရဖ တပ်မှုးမြထွန်းဦးက အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ ရတာဖြစ်တယ်။
ဦးကိုနီကို သတ်ဖြတ် ခဲ့တဲ့ အောင်ဝင်း ခိုင်ဆိုတာလဲ ရွှေမန်းသားအောင်သက်မန်းနဲ့ စီးပွားရေး ပါတာနာတွေဖြစ်တယ်။
ကျူပ် ကို သူရွှေမန်း မိသားစုနဲ့ အုပ်စုရဲ့ ယုတ်မာ မှု တွေကို ဖော် ထုတ် ရေးသားတော့ ပြား ၉၀ ဒီမိုတွေ ။ရွှေမန်း ဘောမ တွေက ၀ိုင်းပြီး ပြောကြတယ်။ ဒီမိုကြောင် တခ်ျို့ လဲ ပါသပေါ့လေ။ နားလည် အောင် ထပ် ပြော မယ် မှတ် ထား ။ ဒီလူယုတ်မာ ရွှေမန်း မိသားစု ရဲ့ အယင်ကရောအခု ရော နောက်ကွယ် က ယုတ်မာ တဲ့ မသမာ အကြောင်းအရာတွေ အားလုံးကို သိထားလို့ေ၇းနေတာပါ။
နိုင်ငံေ၇းမှာကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးကမျက်မြင် ရန်သူ တွေ မဟုတ်ဘူး။ sleeping enemy တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအယူ အဆ ကို နိုင်ငံတကာက နိုင်ငံရေး ပါးနပ် ထက်မြက် တဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတိုင်းက လက်ခံ ထားကြတယ်။ နောက် ပြောသေးတယ် ရွှေမန်း အကြောင်းဘဲ ရေးနေတယ် တခြားအဘတွေ အကြောင်းဘာလို့ မေ၇းတာလဲတဲ့ ။ ကျူ ပ်ကရွှေမန်း အကြောင်းရေးနေချိန် မှာခင်ဗျားတို့ က တခြားအဘတွေ ရဲ့ မသမာမှု တွေေ၇းကြလေဗျာ။ ဒီလို ကြတော့ လဲ မေ၇း နိုင်ကြဘူး။
ရွှေမန်းဆိုတာ စစ်အဘ တွေ ထဲ က အကြီးဆုံးသန်းရွှေ လက်ပါးစေ ငုပ် ကောင်ဖြစ်တယ်။စစ်တပ် ခေတ်မှာ သန်း ရွှေရဲ့လျို့ ဝှက် နိုင်ငံေ၇း၊ စစ်ရေး အကြံဆိုးတွေကို နောက်ကွယ်ကနေ အကောင်အထည် ဖော် ရတာ ရွှေ
မန်း ဖြစ်ပါတယ.်။ပထမ အယင်တော့ ခင် ညွှန့် ပေါ့ လေ။ ခင်ညွှန့်ပြုတ် တော့ ရွှေမန်း ကို ဆက် လုပ်ခိုင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေမန်း မိသားစု ဘယ်လောက် ခိုးထားသလဲ ဆိုတာ သန်းေ၇ွှတောင် အံ့သြ ရသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ ရတယ်။ တရသ လက်နက်ကိုင်တွေ လေးစားခဲ့ ရတဲ့ ပဒို မန်း ရှာ ကို လုပ်ကြံ ဖို့နောက်ကွယ်က စီမံကိန်း ဆွဲ ခဲ့ သူက ရွှေမန်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက စရဖ တပ်မှုးမြထွန်းဦးက အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ ရတာဖြစ်တယ်။
ရွှေမန်းမွေးထားတဲ့ ပြင်ပက တတိယ နိင်ငံရေး အင်အားစုတွေနဲ့ မီဒီယာကြီးတွေ ဟာ NLD ကို နောက်ကနေ တိုက်ခိုက်နေတာတွေက သက်သေတွေပါဘဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ရွှေမန်းက ဦးထင်ကျော် နေရာ ကို ပေးဖို့ တောင်းဆိုတော့ ဒေါ်စုက ငြင်းလိုက်ပါတယ်။ ရွှေမန်း စိတ် ခုသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ကနေ တပည့်တပန်း လက်ဝေခံတွေ သုံး
ပြီး NLD အစိုးရကို ပညာပြနေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွဲ ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တိုင်း ၊ အတူတွဲ အခမ်းအနားတက်တိုင်း လူကောင်းလို့ သတ်
မှတ်ယင် ၊ ဒီမို ဖက်တော် သားလို့ သတ် မှတ်မယ် ဆိုယင် စာဖတ် သူကြီးအဲဒီလိုလုပ်ယင်ကော ဘယ်လို သတ်မှတ် ကြမှာလဲ ။ အသိဥာဏ် ဦးစီးတဲ့ မျက်စိတွေ နားတွေ နဲ့ တွေး ခေါ်ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာ့ဒီမို ကရေစီခရီးလမ်း
လမ်းကို ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ကြပါစေ။
(ဝေဖန်နိုင်သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါစေ၊ ဆဲပါက အမိုက်ရိုင်းဆုံးပြန်ဆဲပါမည်။ )
← ခင်ဗျားတို့ ဘုရားစင် ခင်ဗျားတို့ သေချာ ဂရုစိုက် အခု နေရာတော်တော်များများမှာ ကွမ်ရင်မယ်တော်နဲ့ အမ်းကုန်းကြီး ဦးတည်ဘွား….တို့ ဒေသစာရီကြွချီ သတင်းသုံး စံပ္ပယ်နေကြပြီ
လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဟာ ဆူနာမီလို ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ တရားခံဟာ အစိုးရ ဖြစ်နေခဲ့ရင် သူတို့ကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တဲ့ အုပ်စုဘက်ကို အရောက်ပို့နိုင်ဘို့လိုတယ်။ →